Maitiro Ekuunganidzira Wiricheya - Kunze kweBhokisi Gungano
Wiricheya dhizaini uye dhizaini yakafambira mberi kuburikidza nemakore kutanga kubva pakutanga kwayo seyakagadziriswa mudziyo wedanda, kune musoni wakagadzirwa muchina unoonekwa pamatare e basketball kutenderedza USA. Maitiro uye dhizaini zvakabatsirwa kubva mukufambira mberi kwakawanda, hapana iyo inotsauka zvakanyanya kubva pakuita kwakaringana nekufambisa a wiricheya inopa mushandisi.
Maitiro Ekuvaka iyo wiricheya
1. Bvisa zvidimbu zvese kubva muchigadzirwa kurongedza uye uzvirongedze kuti zvionekwe. Chikamu chepachigaro chekutanga chinotambanuka kusvikira chigaro chakasimudzwa chamira munzvimbo. Iwe unogona kubatanidza izvo zvekuwedzera zvikamu kune ino yekutanga chikamu.
2. Isa munzvimbo dzakatsika tsoka pambambo yakawanikwa pamberi pechigaro, pasi penzvimbo yakasimudzwa pamativi ese epombi. Nzvimbo dzetsoka dzinofanirwa kuvhurika kusvika pakati pechigaro kuti dzipe nyaradzo yemakumbo, uye kuti idzivirire kubva pakuzvuzvurudzwa pasi pe wiricheya sezvo ichienda kumberi. Netsoka inofanirwa kunge iri pakona chaipo pachimiro.
3. Fine-gadzira gumbo rinozorora kumunhu anenge achishandisa chigaro. Ipo mushandisi achigara pachigaro, bvisa bhaudhi pazasi pegumbo zororo uye gadzirisa zvichibva pane zvaunofarira uye nyore kwemushandisi. Refasten kana sungisa bhaudhi apo mushandisi anogona kunzwa gumbo kuzorora richapa rakakodzera danho rerutsigiro.
4. Shandisa iyo yekukiya system pane ese maviri vhiri rutsigiro mafuremu kamwe munzvimbo yekugara uye pakamira pese. Kana iyo yekukiya system ikaitwa, mavhiri haafanire kutendeuka kana achisundidzirwa. Aya mabhureki haana kuvakwa kuti amise a wiricheya kunyatsofamba, asi kumisa yakamira wiricheya kubva kuumburuka.
5. Wongorora iyo wiricheya yemhando ipi neipi yematambudziko echimiro. Screw yega yega inoda kuchengetedzwa zvakamira munzvimbo, uye matsime emavhiri anofanirwa kuve akajeka nemarara. Zivai kuti mavhiri ekumberi castor ane yose huwandu hwekufamba uye usavhara mune chero chinzvimbo.